ISD 279 - Osseo Area Schools - 2016 Somali
Cabiritaanka Hormarka Ujeedanada: Natiijada Sahminta ee Xaqleyaalka ee Sanadka 2016ka.
Iskookla degmada waxaa ardayda dhan ay usamaysay ujeedo tayo leh “si ay ugu waxyoodan ayna udiyaariyaan ardayda si ay uyeeshaan isku kalsooni, diiri gelin iyo aqoon ay yididiidadooda ku gaaraan, bulshada wax kutaraan iyo ay kaqaab qaataan wax barasho joogto ah.” Si aanu ucabirno hormarkaas ee aan kucaawino ardayda si ay kugaaran goolkooda, shaqaalaha degmada iskoolada Osseo waxaa ay isu keeneen warar kala duwan.
Ola olahaas waxaa ugu muhim san waxaa ay tahay Sahminta Xaqleyaalka oo ardayda, shaqaalaha iskoolada iyo waalidiinta ama kuwa ciyaalka mas’uul ka’ah jawaabaha ay kabixiyeen “key-mission related areas.” Jawaabta Sahminta ee 2016ka waxaa ay muujisay meelo lagu dabaal degeyo iyo qaybo loo baahanyahay in aan is qaa’no.
Ka Qayb Qaatayaalka
Arday kabadan 12,000 oo fasalada 3-12 ayaa waxay kaqayb qaateen sahminta sanadka iskoolka ee 2015-2016.
Waalidiinta ama kuwa mas’uul ka ah ardayda oo kaqab qaatay sahminta waxaa loo doortay si aan xad lahayn si dadka su'aalaha kajawaabeya ay noqdaan kuwa matala dhamaan walidiinta iyo kuwa ardayda mas'uul ka ah ee degmada iskoolada oo Osseo (kawaas oo kabadan 1,000 waalid/mas'uul ee sanadka 2016.) Sahmintaas waxaa lagu dhigay lughadaha ay kamid yihiin afka ingiriiska, afka Hmongka, af ispaanishka, afka Vietnamka ah, iyo af Soomali.
Sahmintaas waxaa lagu casuumay shaqaalaha dhan ee degmada iskoolada ee Osseo sanadka 2016; 1323 ayaa ka qayb qaatay.
Waxaa Aan Kala Baxnay
Xaqleyaasha sahankooda waxaa loo suubiyay si ay kucaawiso lataliyaasha iskoolada sida ay kucabiri lahaayeen sida aay ardayda aan kucaawini karno sida ay ulakulmi lahaayeen sedex qodob oo muhim ah oo lagahelo degmada goolkaas oo ah; sida yididiidada loo gaari karo, bulshadana la wax taro, iyo sida wax barashada joog tadaa ah ay uga qayb qaadani lahaayeen. Sahmintaas waxaa kasuubiyay Guga (Spring) 2014 ilaa Guga (Spring) 2016.
Yididiidada sida loo gaari lahaa
Arday badan waxay sheegen in “qof iskoolka kashaqeeyo uu kucaawiyay sida ay igaari lahaayeen goolkooda oyna ugu dhawaani lahaayeen yididiidadooda.” Jawaabtaas waxay kor udhaaftay 58% sanadka 2016 halka uu ahaa 51% sanadka 2014.
waalidiinta waxaa ay ubadnaayeen in ay dhahaan qof iskoolka jooga ayaa wuxuu kucaawiyay wiilkooda ama gabadhooda in ay samaystaan gool. Taasi waxay kor udhaaftay 54% laga soo qaado 47%.
labada sanoba, macalimiinta 80% kabadan waxay isku waafaqeen in ay dhahaan “waxaan aniga kucaawini karay ardaydu in ay ogaadaan oo na kudhaqaaqaan in ay ushaqeystaan yididiidadooda.”
Hal arin ayaa ku’adkaatay in ay ardaydu fikrada ay iska qabaan in ay gaari karaan yididiidadooda ee mustaqbalkoodana korsada kor umayn dhaafin (74% labada sanoba), waalidiinta se fikrada ay kaqabaan arintaas hoos bayba udhacday (75% ilaa 72%). Macalimiinta waxa ay tuseen in dhahaan “Ardayda inta badan oo aan is baranay sanadkani waxaa ay igala hadleen yididiidadooda mustaqbalka (63% 2014; 64% 2016).
Wax Tarka Bulshada
Ardayda badan waxaa ay yiraahdeen in iskoolkooda ardayda dhigta ay ugula dhaqmeen si xishmad leh. Taas waxay kor ukacday 50% sanadka 2014 ilaa 67% sanadka 2016.
labada sanoba shanti waalidba afar kamid ah waxaa ay sheeg teen in wiilkooda ama gabadhooda in iskoolka si xishmad leh loo ay uladhaqdeen..
Halka meel oo kor ukacday marka ay timaado bulshada wax qabadkeeda waxaa ay tahay in ardaydu “ay lakulmeen baahida ay uqabaan kuwa kalay xaga madaxnimada???? Wax qabsiga ama siyaabo kalay.”
In kasta ay ardaydu ay tuseen in arinkaan kor uu ukacay (58% ilaa 68%), su'aashani waxaa ay ahayd tan ugu hoosayso oo la isku waafaqo. Waxaana hoos ugu dacay arintaas marka ay timaado xaga waalidiinta (69% ilaa 68%) iyo macalimiin taba (46% ilaa 43%).
Kaqayqaashada Joogtada ah ee wax Barashooyinka Xirfadaha.
Arday badan waxaa ay leeyihiin “Mar hadaan go’aan sado in aan wax adag aan sameeyo, kama haro ilaa aan kadhameeyo.” Tirada intaas qiratay waxaa kor ugu kacday 60% sanadka 2014 marki la garab dhigo sanadka 2016 oo uu ahaa 74%.
Labada sanoba sadax meel labo (ama kabadan) oo waalidiinta waxa ay yiraahdeen “Mar hadii aan go’aansad in aan wax adag sameeyo, aniga kama hari ilaa aan kadhameeyo arintaas.”
Taas hadii la barbardhigo macalimiinta 36% keli ah ayaa iskuraac day in ardaydahaan: “Ardayda inta badan oo aan isbaranayna waxaa ay muujiyeen in so joogta ah ay uraacdaan waxa ay go’aan sadeen.”
Xaga waxbarashada joogtada ah, waxaa ay ubaahan tahay in la xoojiyo. Inkasta ardaydu ay u arkaan qodobkaas in ay kor u kacday (63% ilaa 70%), lakinse aad waalidiinta iskuma’aynan waafiqin (ee hoos buu udhacay 64% ilaa 62%) macalimiintana sidi oo kalay hoos buu udhacay in ay isku waafaqaan wakhtiga maamul in uu ubaahan yahay (39% ilaa 32%).
Sahminta qayb kamid ah, waxaa ay cabirtay sida ardayda iyo waalidiinta aa nu kucaawini karno in ay dareemaan in iskoolka soo dhowayneyo oo shaqaalaha ayaaminaan oo na laxishmayneyo.
Ardayda inta badan waxaa ay leeyihiin in ay dareemeyaan in ay iskoolka kamid yihiin. jawaabta su’aashaas wuxuu kor ugu kacay 62% ilaa 75%.
Waalidiinta inta badan waxaa ay dheheen in iskoolka guud ahaan in ay reerohooda soo dhaweyaan, taas waxay kor udhaaftay 83% ilaa 86%.
Sanadka 2016ka gudeheeda inkasta oy kor udhaaftay guud ahaan, sadax meelood labo meel (64%) ardayda waxaa ay isku raaceen su’asha ah, “Waan ku kalsoonehay in aan ra’yigayga iyo fikradahayga in aan iskoolka la kaashado” iyo “Ardayda si cadaalad ah ayaa loola dhaqmaa iskoolka.”
Xaga waalidku, hadii ay timaado su'aasha ah “Waxaan dareemeya in shaqaalaha iskoolka ay wiilkaygu ama gabadhaydu ayn dayactirin.” Jawaabta su'aashaas kor waxa ay udhaaftay 70% ilaa 71%.
Arday badan ayaa waxaa ay leeyihiin in dadka wawayn si xishmad leh ay uladhaqmaan, taas waxaa ay kor udhaaftay 74% ilaa 83%.
Labada sanoba, waalidiinta intooda badan (92% ilaa 93%) waxaa ay soo sheegteen in iskoolka wiilkooda ama gabadhooda si xishmad leh ay ula dhaqmaan.
Ardayda aragtidooda oo ah “Dadka waawayn oo iskoolka jooga waxaa ay isku tacalujiyaan in ay igatiraan walaac hadii aan qaboo.” Waxay kor dhaaftay boqolkiiba afar, lakinse 70% kor imadhaafin marki loo fiiriyo sanooyinki horay.
Waalidiinta fikradohooda wax yar ayuu hoos udhacay (80% ilaa 78%) mar ay timaado “Shaqaalaha iskoolka balan tooda ayay fuliyaan.”
Ardayda inta badan waxaa ay leeyihiin dadka waa wayn ee iskoolka way aaminaan ardaydu taas ay kor ukacday 72% ilaa 81%.
labada sanoba, tobankii waalidba 9 kamid ah waxay muujiyeen in dadka waawayn ee iskoolka kashaqeeya ay aaminaan.
Natiijooyinkan marki loo fiiriyo degmo ahaan, khaladaadki ka imani karo sahmintaas xaqleyaalkaas waa xaweye +/- 2% marki loo fiiriyo kalsoonida 95% lagu qabo.
Maxaa hadaba kuxiga?
Iskoolka iyo degmada madaxdooda way sii wadi doonaan in ay isticmaalaan natiijooyinka sahminta ay kaheleen si ay qorshooyinkooda u wanaajiyaan. Sanad walba ardayda iyo shaqaalaha iskoolka waa la sahmindoona, marka ay timaado waalidiinta ama kuwa ciyaalka mas'uul ka ah waxaa la sahmindoona sana dhaaf.